Global News Nepal शेयर Archives - Global News Nepal
बुद्धभूमिको आईपीओ बाँडफाँड, कसले कति पाए ? हेर्नुहोस् विवरणसहित
काठमाडौं : बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) आज बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटको कार्यालयमा शुक्रबार सेयर बाँडफाँट भएको हो । कम्पनीको आईपीओमा कुल २० लाख ३० हजार नौ सय ५५...
बुद्धभूमि हाइड्रोको आईपीओ भोलि बाँडफाँट
काठमाडौं : बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओ शुक्रबार (भोलि) बाँडफाँट हुने भएको छ । कम्पनीले असोज ११ देखि १४ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि ८ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओमा ३५.५५ गुणा बढी २ करोड ६५ खाल ३१ हजार...
शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन हरियाली, उच्च अंकले बढ्यो नेप्से: लगानीकर्तामा छायो खुशियाली
काठमाडौं : साताको अन्तिम कारोबार दिन बुधबार शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । साताको दुइ दिन लगातार घटेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन दोहोरो अंकले बढेको थियो । चौथो दिन बुधबार पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६८.४७ अंकले बढेको छ...
मध्यभोटेकोशीको यति धेरै कित्ता आईपीओ आजदेखि खुला, कति कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने ?
काठमाडौं : आजदेखि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले आजबाट प्रतिकित्ता १०० का दरले ९० लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । यसमध्ये ५ प्रतिशत सामूहिक लगानीकोष र ४ प्रतिशत कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ...
लगातार गिरावत आएको शेयर बजारमा मंगलवार उच्च अंकको वृद्धि, कति अंकले बढ्यो नेप्से?
काठमाडौं : कारोबार साताको तेस्रो कारोबार दिन मंलबार नेप्से सूचक ४१ अंकले बढेको छ । पछिल्ला दिनमा लगातार घटेको नेप्से मंगलबार ४१.८४ अकंले बढेर २६१२.६५ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै मंगलबार सेन्सेटिभ सूचक पनि ७.०४ अंकले बढेको छ भने फ्लोट...
कुमारी बैंकको ४ लाख ३३ हजार ६४० कित्ता संस्थापक शेयर विक्रीमा, न्यूनतम भाउ कति ?
काठमाडौं : कुमारी बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी भेञ्चर ट्रेडिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको नाममा रहेको १ लाख ९५ हजार कित्ता र बेद प्रकाश उप्रेतीको नाममा रहेको २...